U-Erasmus ujabulela ithuba lokuvivinya abamaBhokobhoko
ULUKHANYO Am weSouth Africa A ngesikhathi bedlala neBritish and Irish Lions ngoLwesithathu Isithombe: BACKPAGEPIX
UMQONDISI we-rugby kuleli uRassie Erasmus, uthi wanelisekile ngokuqeqesheka okutholwe abadlali beqembu leSouth Africa A, ngesikhathi litholene phezulu namaBritish and Irish Lions ngoLwesithathu ebusuku.
U-Erasmus nguyena obebambe izintambo ngesikhathi iqembu lehlula izivakashi ngo 17-13 eCape Town Stadium.
Ama-try eNingizimu Afrika abekwe nguSbu Nkosi noLukhanyo Am, uMorne Steyn wakhahlela ama-conversion amabili nephenathi eyodwa. Amaphuzu amaBritish Lions aqhamuke nge-try kaWyn Jones, i-conversion namaphenathi amabili ashaywe ngu-Owen Farrell.
Yize lo mdlalo ubuthathwa njengeminye yokungcweka ngaphambi kokuthi amaBritish Lions abhekane ngqo namaBhokobhoko, baningi abadlali beqembu lesizwe abafakiwe esikwatini seSouth Africa A, ukuze bathole ithuba lokudlala emva kokubhuntsha komdlalo weGeorgia.
"Bekulindelekile ukuthi abadlali bakhathale ngasekugcineni emva kokuchitha isikhathi esingangeviki bezivalele ehhotela ngenxa yeCoronavirus. Bazilolonge kabili kuphela ndawonye," kusho u-Erasmus.
"Amakhadi amabili aphuzi (atholwe uFaf de Klerk noMarco van Staden) nawo asenzele phansi. Umdlalo udlalwe ngesivinini esiphezulu, noma kungekho okuningi okugqamile esikwenzile kodwa abadlali basikhombisile isibindi nokuzimisela.
"Ngeke silunqobe uchungechunge amaBhokobhoko azoludlala namaBritish Lions, uma siphinde sadlala ngale ndlela. Kuningi okumele sikulungise njengoba sesibheke emdlalweni wokuqala. Yingakho kubalulekile ukuthi abadlali bathole isikhathi esanele enkundleni."
AmaBritish Lions azodlala owokugcina wokungcweka namaStormers eKapa ngoLwesihlanu, bese eqala impi yawo namaBhokobhoko ngoMgqibelo ozayo.
Khonamanjalo, iSA Rugby imemezele ukuthi imidlalo emibili yeCarling Currie Cup obekufanele idlalwe kule mpelasonto ngeke isabakhona.
Umdlalo obekumele ubephakathi kweCell C Sharks neNew Nation Pumas eJonsson Kings Park ngoLwesihlanu uphazanyiswe ukuqubuka kodlame eThekwini namaphethelo.
Omunye ongeke usabakhona oweTafel Lager Griquas neVodacom Bulls obuzodlalelwa eTafel Lager Park, ngoMgqibelo.
Wonke amaqembu aphazamisekile agixabezwe ngamaphuzu amane kanti kuzoqoshwa phansi ukuthi le midlalo iphele ngo 0-0. Anikezwe amanye amaphuzu amane amaSharks neXerox Lions ngenxa yomdlalo okwakumele udlalwe ngesonto eledlule, owagcina umisiwe ukuze iqembu laseThekwini, lidlale okwesibili namaBritish Lions.
Usazoqhubeka umdlalo weLions neToyota Cheetahs ozodlalelwa e-Emirates Airlines Park, ngoMgqibelo ngo-2.45 ntambama.